Bogg Cusub oo Laga Leeyahy Kaalinka 5aad, oo War Cusub ka Qoray Dilkii Dr. Dolal – Rasaasa News
Bogg Cusub oo Laga Leeyahy Kaalinka 5aad, oo War Cusub ka Qoray Dilkii Dr. Dolal
Aug 9, 2009 Dilkii Dr.Dolal, Kilil5, ONLF
Xaq daboolka lama saari karo daalim uu galay, in kasta oo dabool lagu rogo oo daaha lagu laabo Rabi baan dadayn waa Allihi daa,imka ahaaye, raadkii daboolaa haduu daahir soo baxaye daynkayga maqan haatan waan daba galayaaye Dolal ragii dilay walayna dunida joogayne, dan u baxa dagaalkii xaqaa haatan wuu dumaye.
Bogg aan filayo in laga lilaaee yahay Kaalinka 5aad, ayaa laba maalmood ka dib, kolkii ay soo baxday Warbixin ay soo saareen Gudiga Baadhista iyo Xaqiiqo Raadinta ee Dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal, ayaa isana soo saaray war cusub oo laga soo xigtay Booliska Degaanka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa warbixinta ku jirtay in Qoyska reer Maxamed Siraad Dolal ay dabo socdeen wasaarada arimaha dibada ee Ingriiska, MP xaafadii uu deganaa Dr. Dolal iyo waliba xoghayaha hormarinta caalamiga dibada [secretary of state for international development] ninka u qaabilsan oo la yidhaahdo Douglas Alexander. Waxay aad kuligood isugu dhabar jabiyeen oo ay culasy badan ku saareen xukuumada Itobiya sidii lagu heli lahaa lafihii Dr. Dolal, xukuumada Itobiya waxay sheegtay in ayna waxba ka ogayn arintaas, waxaa loo sheegay in Kaalinka 5aad ka warhayo isna sida warbixinta ku qoran waxay sheegeen in ayna waxba ka ogayn.
Sida ay gudigu warbixinta ku soo gudbiyeen wali waxaa u dhiman soo daabicida magacyada dadkii Markhaatiga ahaa, oo codsaday in aan la soo qorin magacyadooda sababo jira awgood iyo waliba gacan ku dhiiglayaalka qudha jaray. Waxaa kale oo warbixinta ku qoran in gudi loo saari doono soo wixii lagula xaaltami dadka ka dambeeyey dilka Dr. Maxamed Siraad Dolal. Warbixintu waxaa kaliya oo ay sheegtay in aan la garanaynin sida ay Booliska Kaalinka 5aad ku heleen qalabka Dr. Dolal, sida laga soo xigtay madaxda Kaalinka 5aad, waa loo keenay qalabka wayna ka gaabsadeen sida lagu soo gaadhsiiyey qalabka, wayse sheegeen sida sawirada internetka loo soo dhigay.
Hadaba, waxaa maanta lagu soo qoray bogga aan kor ku sheegnay CAKAARA.COM oo laga lee yahay Kaalinka 5aad, lana meeqaan ah bogga EEGGA.COM oo hore u soo bandhigay sawirada mayka Dr. Dolal, ayaa maanta soo daabacay warbixin sida ay sheegeen uu sii daayey in ka tirsan Booliska Kaalinka isaga oo siiyey nin ay saaxiib yihiin oo shacab ah. Waxaana uu faahfaahiyey bogani sida ay ku heleen qalabka iyo sawirka mayka Dr. Dolal, arintaas oo ah arin cusub oo aan warbixinta hore loogu qorin.
Waxaa uu boggu, waxa ay ka tahayba ka gaabsaday in ay sheegaan magaca ninka dhaawaca ah ee lagu qabtay qalabka Dr.Dolal iyo halka uu ku sugan yahay iyo faahfaahin dheeraad ah.
Bogga Kaalinka 5aad ayeyna marna suurto gal u ahayn in sida ay wax u og yihiin in ay wax u qoraan, balse waxaa ay qoraan oo kaliya warar u suuban Kaalinka kaliya, naftu waa cabdee ceeb ma leh ciqaab ka cabsigu.
Warbixinta uu qoray bogani, oo aad moodo in ay is leedahay sax warbixin hore loo qoray ayaa sidan wax u qortay;
Dilkii Maxamed Siraad Doolaal iyo Xogo Dheeraad Ah
Guddida Xaqiiqa Raadinta Dilka Dr Doolaal, oo Baadhitaan Dheer ka Dib Soo Saartay Warbixin Faahfaahsan
Xaabo Tuugo Matalaysay Kooxdii Jwxo-shiil, oo Shalay Gabal Dhicii ku Kulmay Guri ay Leedahay Jaaliyada Jamaica